ओली–दाहालबीच झण्डै ३ घण्टा लामो छलफल, के भयो कुराकानी ? « Sansar News
ओली–दाहालबीच झण्डै ३ घण्टा लामो छलफल, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच झण्डै ३ घण्टा लामो छलफल भएको छ । पार्टी विवाद समाधानका लागि भन्दै अध्यक्षद्वयबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ छलफल भएको हो ।
छलफलमा दुई अध्यक्षसहित महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा पनि सहभागि भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । छलफलबाट के विषयमा सहमती भयो भन्ने विषय दुवै पक्षले सार्वजनिक नगरेको भए पनि छलफल सौहार्दपूर्णं रहेको बताइएको छ ।
यसअघि आइतबार दिउँसो पार्टीको पछिल्लो विवादबारे अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेतासँग छलफल गरेका थिए । शनिबार सचिवालय बैठकसँगै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष ओलीसँग अर्ली महाधिवेशन गर्नेबारे सहमती गरेको चर्चा भएसँगै उनले नेताहरुलाई बोलाएर स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको अर्ली महाधिवेशन मंसिरमा गर्ने प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएसँगै दाहालको उनी निकटबाटै आलोचना भएको थियो । साथै सचिवालय बैठक लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग दुई अध्यक्षको तर्फबाट भएको भेटप्रति नेताहरुले आशंका जनाएका छन् ।